दसैँ-असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीक राष्ट्रिय पर्व - Harekpal
Monday, Oct, 21, 2019 ४ कार्तिक २०७६, सोमबार
असफल हुनुको कारण के हो ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन
आज मंगलवार, कस्ता कार्यका निम्ति शुभ रहनेछ ? हेर्नुहोस् आजको दिन २०७६ कार्तिक ५ गते
नेपाल कुनै पनि देशको दबाब र प्रभावमा छैन : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा नेपालले गरेका कामको उच्च सराहना
विदेशमा अध्ययनरत युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्कन उपराष्ट्रपतिकाे आह्वान
नेपालकाे विकासमा जापान प्रमुख साझेदार : राष्ट्रपति भण्डारी
मखमलीको 'फुल भैं फुलेको मेरो जिन्दगी' सार्बजनिक
कसरी सर्छ डेंगु ? यसका लक्ष्यण र बच्ने उपाय के के हुन ?
दसैँ-असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीक राष्ट्रिय पर्व
१९ आश्विन २०७६, आईतवार १३:३९ मा प्रकाशित0प्रतिक्रिया
– हरिविनोद अधिकारी –
बडा दसैँ अर्थात् विजया दशमी अर्थात् दसैँ । विजयका लागि नौ दिनसम्म देवीको आराधना गरेर शक्ति सञ्चय गरी आफ्नो लक्ष्यप्रति एकाग्र हुने सामाजिक पर्व । देवीको आराधना गरी आफूलाई , आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित पार्ने पर्व । परिवारका सबै जम्मा भएर एकअर्कासँग आशीर्वचन साटासाट गर्ने सामाजिक पर्व । खानपिनका लागि र परिवार मिलन तथा पुनर्मिलनका लागि वर्षमा एकपटक टीकाटालो गरी एकता प्रदर्शन गर्ने साँस्कृतिक पर्व ।
दसैँ नेपालीहरुको विशष्ट अवसर । वर्षका एकपटक आउने राष्ट्रिय चाड । रातो टीका निधारमा लगाई फूलको ठाउँमा जमराले पातीको काम गर्ने विशिष्ट धार्मिक अवसर ।
खासगरी हिन्दुहरुको धार्मिक पर्व भए पनि अहिले यो समग्रमा जहाँ जहाँ नेपालीहरु छन् विश्वभर, ती ती ठाउँमा नेपाली चाडको रुपमा मनाउन थालिएको छ । परिवारको मिलन तथा पुनर्मिलनको यस्तो अवसर बनेको छ कि जसले पनि बाहिर रहेका परिवारका सदस्यहरुलाई कभ्तीमा पनि दसैँमा त आउनै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था बनेको देखिन्छ । वर्षभरिमा एकपटक भए पनि भेटघाट गर्ने साँस्कृतिक अवसरको रुपमा दसँैलाई लिइएको छ ।
आध्यात्मिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा पारम्परिक अवसरको रुपमा लिइने दसैँ वास्तवमा विजया दशमीका दिन दुर्गा भवानीको प्रसाद ग्रहण गरेर सबै खालका बिघ्नबाट बचेर आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने साइतको रुपमा मानिने दशमीको अपभ्रम्शको रुपमा आएको हुनुपर्छ । मूलतः नवरात्रिका लागि पूजा आराधना गर्ने समय भएकाले नौरथा पनि भनिन्छ । नेपालमा जुन भव्य र राष्ट्रियरुपमा सबै नेपालीहरुले यो चाडलाई स्वीकार गरेका छन् , विश्वमा अरु कुनै त्यस्तो चाड देखिएको छैन । हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरुले संयुक्तरुपमा मनाउने यो चाडले राष्ट्रियस्वरुप ग्रहण गरेको धेरै पहिलेदेखि हो ।अहिले त यो चाड नेपालीहरुको साझा चाडको रुपमा मनाइन थालेको छ देशमा र विदेशमा समेत ।
इसाई धर्मवालम्वीहरुले क्रिसमस र इस्लाम धर्मवालम्वीहरुले रमदान पछिको ईद मनाएजस्तै हो पनि भनिन्छ । हिन्दूहरुको अरु सबै चाड पर्वमा वा धार्मिक अनुष्ठानमा प्रसादको रुपमा देवीदेवतालाई फूल चढाइन्छ र त्यही फूल प्रसादको रुपमा ग्रहण गरिन्छ तर दसैँमा जमरालाई नै प्रसादको रुपमा लगाइन्छ । सम्भवतः यो पनि एउटा विशेषता हो दसैँको । आयुर्वेदमा जमराको महत्व छ त्यसको रसपान गर्नुमा छ, जसले रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि गर्छ शरीरमा । सायद त्यसैका प्रतीकात्मकरुपमा जमरा लगाइएको हुनुपर्छ तर नेपालमा प्रत्येक घरमा जमरा राखिन्छ र टीकाका दिनमा जमराको पाती लगाइन्छ । फूलपातीका दिन भित्राउने फूलपाती त हुन्छ तर खासमा पहेँलो जमराको महत्व नै दसैँमा खास हुन्छ ।
धार्मिक अनुष्ठानका रुपमा देवीस्तुतिको रुपमा चण्डीको पाठ गरिन्छ जसलाई मार्कण्डेय पुराणबाट लिइएको छ । हुन त श्रुति र स्मृतिमा जताततै देवीको आराधना गरिएको छ । वास्तवमा देवी प्रकृति हुन् । विभिन्न उदाहरणमार्फत् प्रकृतिको पूजा गरिएको छ र अन्ततः मानिसहरुले दानवीस्वरुपबाट मानवीय स्वरुपमा आउनै पर्छ भन्ने कुरा मार्कण्डेय पुराणको देवीस्तुतिले देखाउँछ । यही शारदीय नवरात्रिमा देवी भागवतको नवाह लगाउने चलन पनि छ । तर चण्डी नामाकरण गरेर मार्कण्डेयले बताएको देवी माहात्म्यलाई नै नेपालमा नवरात्रिमा देवीको स्तुतिको रुपमा पाठ गरिन्छ । सप्तशती देवीस्तुतिको रुपमा पाठ गरिने चण्डीलाई तीन चरित्रमा बाँडिएको छ । प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र र उत्तर चरित्र । तीनवटै चरित्रमा मधुकैटभ, महिषासुर, चण्डमुण्ड र शुम्भ निःशुम्भको प्रतीकात्मक अहङ्कारविरुद्ध समय वा प्रकृतिले देवीको रुपमा दिने दण्डलाई कलात्मकरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। स्त्रीशक्तिको महत्व नै प्रकृतिको आधार हो । प्रकृति र पुरुषको अनुपम उदाहरण दिएर जीवनलाई कसरी उदाहरणीय बनाउने भन्ने कुराको जानकारी देवीस्तुतिमार्फत् समाजलाई हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि दिइएको छ ।
समाजमा असल र खराब दुवै प्रवृत्ति हुन्छन् र अन्ततः समाजले खराब भनेको प्रवृत्तिमा दम्भ हुन्छ, दम्ध शक्तिबाट सञ्चित हुन्छ र शक्तिबाट हुने खराबीलाई मधु कैटभ, महिषासुर, शुम्भ निःशुम्भ जस्ता बलशाली पुरुषका कामकार्बाहीबाट प्रस्तुत गरी देवीले ती अहङ्कार ध्वस्त पारको कथा नै सप्तशतीको मूल धार हो । अनि उदाहरणका लागि सुरथ राजा, समाधि नामका वैश्यका कथाले देवी माहात्म्यको रुपमा जानकारी गराएर प्रकृतिको अनुपम लीलाको उद्घाटन गरिएको छ ।
अरु देशमा मार्कण्डेय पुराणका वारेमा गहन अध्ययन गरिएको पाइन्छ जसले प्रकृतिको त्यो अथाह क्षमतालाई देवीको क्षमताको रुपमा व्याख्या गरेर नयाँ नयाँ रहस्य पत्ता लगाएका छन् । तर हामी आफ्नै हिमालयकी छोरीका वारेमा वा अक्षता प्रकृतिका वारेमा जानकारी राख्नुभन्दा दसैँमा पाठ गरेर एकवर्षसम्म आनन्दले बस्छौँ ।
दसैँको सबैभन्दा ठूलो महत्व भनेको पारिवारिक एकता नै हो , समाजलाई एउटै परिवारको रुपमा मानेर बस्ने सहनशीलता र क्षमता विकास नै हो । हजारौँ वर्षदेखि चलेको यो प्रथाले मनोरञ्जनका रुपमा पिङ खेल्ने चलन चलाएको देखिन्छ गाउँ गाउँमा । अनि प्रत्येक घर घरमा जमरा राख्ने र देवीको आराधना गर्ने विशिष्ट चलन देखिन्छ । हाम्रै तराई मधेसमा सामूहिक रुपमा देवीको आराधना गर्ने चलन छ तर पहाडी भेगमा प्रत्येक परिवारमा देवीको आराधना गरी घटस्थापना, जमरा राख्ने र टीका लगाउने चलन छ । यसमा मान्यजनको हातबाट देवीको प्रसाद ग्रहण गर्नु भनेको विजयका लागि आशीर्वचन प्राप्त गर्नु हो ।
राजा सुरथले पनि देवीको आराधना गरेर मात्र लक्ष्य प्राप्त गरे र आफ्नो गुमेको राज्य फेला पारे, पुरुषोत्तम श्रीरामले पनि देवीके आवाहन र आराधनाले मात्र महाबली रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो भन्ने धारणा छ । त्यसैले कुने नयाँ काम गर्नका लागि र नयाँ लक्ष्यप्राप्तिका लागि विजया भवानीको आशीर्वचन चाहिन्छ भन्ने लोक मान्यता छ । त्यसैले सबै देवीहरु शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता,कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्रीको पूजा गरेर नवदुर्गाको आराधना गर्ने चलन छ । वास्तवमा नेपाली हिमालयकी छोरी पार्वती नै यी सबै हुन् । उनैको पूजा हो , सायद नेपालमा दसैँको विशिष्टता नै त्यही होला ।
असत्यमाथि सत्यको विजय नै विजया दशमीको अर्थ हो । खराब प्रवृत्तिका विरुद्ध जाइलाग्ने सँस्कृतिको किास नै दसैँको महत्व हो । निर्भय भएर गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्नका लागि दसैँले सधैँ हामीलाई अभिप्रेरित गरिरहेको हुन्छ ।
हामी नेपालहिरुले पनि असत्यका विरुद्ध सत्यको विजय हुने सन्देश दिने यो दसैँको महत्वलाई खानपिन र मनोरञ्जनको पक्षबाट मात्र हेर्नु हुँदैन । समाजमा देखिएको भ्रष्टाचार , अनाचार, अत्याचार , व्यभिचारका विरुद्धमा देवीले गरेजस्तै गरी आक्रमण गरेर समाज रुपान्तरणको पक्षमा ज्ञानलाई लैजान सक्नुपर्छ । मान्न त प्रत्येक वर्ष दसैँ मानेका छौँ तर त्यसले दिएको सन्देशलाई हामीले वास्ता नगरेको देखिन्छ ।
नेपालीमात्रको यो आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक पर्वलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउने र असत्यका विरुद्ध सत्यको विजय हुने विजया भवानीको सन्देशलाई चरितार्थ गर्ने बेला आएको छ । सबैमा विजया दशमीको शुभकामना र नराम्रा आसुरी प्रवृत्तिविरुद्ध लड्ने क्षमता हामीमा आओस् भन्ने चाहना सहित ।
२ कार्तिक २०७६, शनिबार १८:२१
आमसञ्चारका माध्यममा कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने ?
२९ आश्विन २०७६, बुधबार १२:५३
नेपालको आयामिक संवेदनशीलता
२७ आश्विन २०७६, सोमबार १३:३९
नेपाली कां‌ग्रेसको क्रोध
२६ आश्विन २०७६, आईतवार १३:२१
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा चीन–नेपाल संगसंगै– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी (सम्बोधनको पूर्णपाठ सहित)
२६ आश्विन २०७६, आईतवार १३:१९
चिनियाँ राष्ट्रपतिले भने– नेपाललाई भूजडित बनाउन मद्दत गर्छौं (सम्बोधनको पूर्णपाठसहित)
२४ आश्विन २०७६, शुक्रबार १६:५०
मञ्जुश्रीको पाइला पछ्याउँदै सी
चिनियाँ पथबाट प्रशिक्षित नेपालका कम्युनिष्टबाट लोकतन्त्र बलियो हुन्छ?
नेकपाको सरकार जसले ‘नाङ्लो ठटाए’ पनि पाँच वर्ष निरन्तर जान्छ : सञ्चारमन्त्री
सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा सहकारी अभियन्ताहरू कसले के भने ?
एनआरएनएको तर्फबाट १२ अर्ब लगानी भित्र्याउन काम शुरु भइसक्यो : अध्यक्ष कुमार पन्त
विद्युतीय बत्तीमा ग्राहकको आकर्षण
करूणामा सोफा थरीथरीका
कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न ‘कालीगण्डकी महोत्सव’
"ठिक छ ठिक छ" सार्बजनिक
चलचित्र ‘लक्ष्मी रानी’काे सुखद ओपनिङ
‘पहिले दिल’ गीतको भिडियो सार्वजनिक
"हातैमा लाउँने सुनको बाला" सार्वजनिक